राष्ट्रियसभा निर्वाचन | Ratopati
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि तोकिएको आचारसंहिताको समयावधि समाप्त access_timeमाघ १०, २०७६
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि तोकिएको निर्वाचन आचारसंहिताको समयावधि आजदेखि समाप्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले माद्द ९ गते हुने निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै पुस २७ गतदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको थियो । आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आचारसंहिता...
यी हुन् राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विजयी १८ सांसद access_timeमाघ ९, २०७६
काठमाडौं – बिहीबार भएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनबाट १८ जना सांसद चुनिएका छन्। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश दुईमा नेकपा– राजपा र काँग्रेस समाजवादीबीच तालमेल भएको थियो । भने अन्य प्रदेशमा विशेषत नेकपा र काँग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सातवट...
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : कुन प्रदेशमा कति मत खस्यो ? access_timeमाघ ९, २०७६
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनकाको मतदान कार्य सम्पन्न भएको छ । विहीबार बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्मका मतदानका लागि समय निर्धारण गरिएको थियो । प्रदेश १ को बिराटनगर महानगरपालिकाको बीरेन्द्र सभागृह, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको महेन्द्र नारायण निधि स्...
विमलेन्द्र–उपेन्द्रको रणनीति फेल : प्रदेश २ मा नेकपा–राजपा गठबन्धनलाई पूर्ण सफलता access_timeमाघ ९, २०७६
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश २ भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीचको गठनबन्धनलाई पूर्ण सफलता मिलेको छ । नेकपा– राजपालाई क्रस भोटिङको भय थियो । प्रदेश २ मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपा...
प्रदेश ५ राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सबै नेकपाका उम्मेदवार विजयी access_timeमाघ ९, २०७६
बुटवल । प्रदेश ५ मा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सबै पद नेकपाले जितेको छ । महिला सदस्यमा नेकपाकी उम्मेद्वार विमला घिमिरे विजयी भएकी छन् । घिमिरे ५७७८ मतभार सहित विजयी भएकी छन् । त्यसैगरि अन्य सदस्यतर्फ नेकपाका गोपाल भट्टराई विजयी भएका छन् । भट्टराईले ५ हजार ३ सय ८२ मत...
जावलाखेल मैदानमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन, २३ तस्बिरमा हेरौं access_timeमाघ ९, २०७६
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको रिक्त १८ सिटका लागि अहिले मुलुकभर मतदान जारी रहेको छ । सोही क्रममा ३ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतको निर्वाचन ललितपुरस्थित जावलाखेल मैदानमा जारी रहेको छ । प्रदेशसभा सदस्य, महानगर प्रमुख उपप्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहर...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले गरे मतदान access_timeमाघ ९, २०७६
काठमाडाँ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदान गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मतदाताका लागि पोखरा महानगरपालिकामा कायम गरिएको निर्वाचन कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री गुरुङले साढे १० बजे मतदान गरेका हुन् । ५९ सदस्यीय रा...
सातै प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मतदान सुरु, कहाँ कहाँ हुँदैछ मतदान ? access_timeमाघ ९, २०७६
काठमाडौ । राष्ट्रियसभाको रिक्त १८ सिटका लागि मतदान सुरु भएको छ । सातै प्रदेशमा मतदान सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार, बिहीबार बिहान १० बजेदेखि तोकिएका मतदानस्थलनमा सुरु भएको मतदान अपराह्न ४ बजेसम्म जारी रहनेछ । आयोगका अनुसार, प्रत्येक प्र...
राष्ट्रियसभा निर्वाचन: मतदाता प्रदेश राजधानी आउँदै access_timeमाघ ८, २०७६
सुर्खेत । बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख प्रदेश राजधानी सुर्खेत आउने क्रम शुरु भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशको मतदानस्थल वीरेन्द्रनगरस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तोकेपछि ७९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमु...
राष्ट्रियसभा निर्वाचन: प्रदेश नं ५ मा ३०५ मतदाता access_timeमाघ ५, २०७६
दाङ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङले प्रदेश नं ५ मा यही माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा तीन पदका लागि ३०५ जना मतदाता रहेको जानकारी दिएको छ । कार्यालयले आज घोराहीमा राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सरोकारवालासँग निर्वाचनका बारेमा जानकारी दिएक...
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपा–राजपालाई क्रस भोटिङको चिन्ता access_timeपुस २८, २०७६
जनकपुर । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरुलाई प्रदेश नम्बर २ मा हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदको निर्वाचनमा क्रस भोटिङको चिन्ताले सताएको छ । सोमबार जनकपुर बार एशोसेशनमा भएको नेकपा र राजपाको संयुक्त बैठकमा क्रस भोटिङबार...
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मत दायाँबायाँ गर्नेको पद धरापमा ! access_timeपुस २२, २०७६
काठमाडौँ –राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतको चलखेल हुने आशंका भइरहेको बेला निर्वाचन आयोगले गरेको एउटा निर्णयले राजनीतिक दलहरुलाई ढुक्क बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका कुनै जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरे वा पार्टीले कारवाही गरे उसका पद स्वत...
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि ४५ उम्मेदवार मैदानमा access_timeपुस २०, २०७६
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको १८ पदका लागि आगामी माघ ९ गते हुने निर्वाचनमा ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उक्त निर्वाचनका लागि मुलुकका सातै प्रदेशमा आज भएको उम्मेदवारी मनोनयपत्र दर्ता शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद गौतमले ज...
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज मनोनयन access_timeपुस २०, २०७६
काठमाडौं । १८ जना राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका १९ मध्ये १८ पदका लागि माघ ...
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भोलि access_timeपुस १९, २०७६
काठकाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी माघ ९ गते हुने निर्वाचनका लागि भोलि २० गते आइतबार उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबार बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवार मनोनयन दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । उनान्साठी सदस्यीय राष्ट्रि...
नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार access_timeपुस १८, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रियसभाका लागि उम्मेदवारहरु टुङ्गो लगाएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १६ जना उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको हो । यसमा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि...
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिन ११ दलको निवेदन access_timeपुस ६, २०७६
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि आगामी माघ ९ गते हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि ११ रानीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार, निवेदन दिने दलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा), नेपाली काँग्रेस, समाजवादी पा...